quarantine စဉ်အတွင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပညာရေးဆိုင်ရာ apps များ | Androidsis
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်သမိုင်းတွင်ထုံးတမ်းစဉ်လာမရှိသောအခြေအနေတွင်နေထိုင်နေရသည်။ ကျွန်တော်တို့ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ခဲ့ကြဘူး။ AND ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များကိုအာရုံစိုက်ကာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအိမ်တွင်နေရန်ဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်များသည်အတန်းတက်သွားမည်ကိုသင်စိုးရိမ်ပါသလား။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင့်အားပညာရေးဆိုင်ရာ Apps mode တွင်အကြံပြုချက်အချို့ယူဆောင်လာပါမည်။
ထိုသို့ရှင်းပါတယ် အိမ်မှမထွက်ခွာမီ ၁၅ ရက်အတွင်းအချိန်များစွာပေးရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူကြီးလူငယ်မရွေးအားလပ်ချိန်များတွင်အိမ်တစ်ခုစီ၏ကန့်သတ်ချက်များအတွင်းကာယလှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျနော်တို့ရရှိသောအသိပညာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အချိန်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ဒီလ ပြီးတော့အရာအားလုံးအထက်မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြန်လာတဲ့အခါသင်ခန်းစာအသစ်တွေရခဲ့တယ်။
1 Apps များသည်အသိပညာကိုမမေ့နိုင်စေရန်
1.2 Rosetta ကျောက်ခဲ
1.5 Sago Mini အာကာသစူးစမ်းလေ့လာသူ
ကလေးငယ်များကိုအိမ်တွင်ထားရန်သို့မဟုတ်ကျောင်းသင်ခန်းစာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ သူတို့အတွက်ကျောင်းမရှိဘဲအိမ်တွင်ရှိနေခြင်းသည်အားလပ်ရက်များနှင့်အားလပ်ချိန်များနှင့်အဓိပ္ပာယ်တူဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ဤအပလီကေးရှင်းများကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ အနည်းငယ်ပြန်လည်လေ့လာခြင်းနှင့်လေ့လာခြင်းပင်သည် ပို၍ ခံနိုင်ရည် ရှိ၍ ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နေ့တာအတွက်နေရာတစ်နေရာရှာနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သေချာသည်၊ ၎င်းသည်တစ်နေ့တာလုံးကိုမတူကွဲပြားစေရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
စားပွဲ ရောက်ရှိသော Apps များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Santillana ၏လက်ဖြင့်။ တစ် ဦး နှင့်အတူအငယ်ဆုံး၏ပညာရေးအတွက်အခြေခံထုတ်ဝေသူ ကဏ္sectorအတွက်ရှည်လျားသောအတွေ့အကြုံ သူကအသစ်သောသင်ကြားမှုနည်းစနစ်များလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုသိခဲ့သည် အဓိကအားဖြင့်မူလတန်းကျောင်းကျောင်းသားများအတွက်ရည်ရွယ်သည် ယင်း၏အကြောင်းအရာနှင့်၎င်း၏အလုပ်လုပ်နည်းလမ်းအဘို့။
ငါတို့ရှာတယ် ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်နှစ်ခု အဆင့်တစ်ခုစီ၏ရည်ရွယ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောအကြောင်းအရာများကိုကိုင်တွယ်သောအက်ပလီကေးရှင်းများစွာမလိုအပ်ဘဲ။ ၏, ၌တည်၏35 နှစ်ကျနော်တို့မြှင့်တင်ရန်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောလှုပ်ရှားမှုများရှာပါ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ ၎င်းသည်အစောပိုင်းကလေးဘဝပညာရေးမှရရှိသောဘုံသဘောတရားများကိုပိုမိုခိုင်မာစေရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ငါတို့တွေ့တယ် လယ်ယာမြေ, အရောင်းအ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များs ကို, etc
စင်မြင့်အတွက် ၆ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်အထိ ကျနော်တို့အတန်ငယ်ပိုပြီးအဆင့်မြင့်အကြောင်းအရာကြည့်ပါ။ ပျော်စရာကောင်းပြီးအမြင်အာရုံဖြင့်အရေးကြီးသောဘာသာရပ်များ၏သဘောတရားများဖြစ်သည် သင်္ချာ၊ ဘာသာစကား၊ သိပ္ပံ၊ အင်္ဂလိပ်နှင့်အနုပညာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုအထိလေ့လာသိရှိခဲ့သမျှနှင့်အညီနောက်ဆုံးပေါ်တက်ပြီးသင်ကျောင်းတွင်မကြာမီပြန်တွေ့ရမည့်ဗဟုသုတများကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။
ဤမျှလောက်များစွာသော Apps များအနက်တစ် ဦး App ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သံသယမရှိဘဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အညွှန်းကတ်များနှင့်မှတ်စုစာအုပ်များ ငါတို့တွေ့သောကလေးများသည်ကျောင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်မကြာမီ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ လွတ်လပ်စွာဆွဲရန်နှင့်ဖန်တီးရန်သင်၏ဖန်တီးမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခုလည်းရှိသည်။
ရေးသားသူ: Grupo Santillana Educación Global, SL
ပညာရေးဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များစွာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ဘာသာစကားများမှသီးသန့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထား။ ၎င်းနှင့်အတူကလေးငယ်များသည်သူတို့လေ့လာနေသည့်မည်သည့်ဘာသာကိုမဆိုရယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်တိကျသောပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိသော်လည်းအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ရှိပါတယ် တစ်ခုချင်းစီကိုတ ဦး တည်း၏အသိပညာ fit မှရသောအများအပြားအဆင့်ဆင့်.
တစ်ဦးနှင့်အတူ ၄ င်းတို့ကိုစာဖတ်ရန်၊ ပြောဆိုရန်နှင့်လေ့လာရန်အတွက်ပြောင်းလဲရန်အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများစွာရှိသည် သူတို့ကသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်အသံထွက်များကိုတွေ့နိုင်သည့်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သည့်ဗွီဒီယိုများနှင့်လိုအပ်သလောက်အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။ သင့်အားပထမ ဦး ဆုံးအခြိနျမှ စ၍ စကားပွောစသောဘာသာစကားသစ်ကိုသင်ယူရန်သက်သေပြသည့်နည်းလမ်း။
Rosetta Stone: ဘာသာစကားသင်ယူပါ၊ လေ့ကျင့်ပါ၊ ပြောဆိုပါ
၎င်း၏နာမကိုအမှီအကြံပြုအဖြစ်ကျနော်တို့ရင်ဆိုင်နေရကြသည် အချိန်စီစဉ်ရန်နှင့်စီစဉ်ရန်လျှောက်လွှာ။ အိမ်မှထွက်ခွာသွားသည့်နေ့ရက်များသည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ချင်သည့်အရာများနှင့်မနက်ဖြန်ဘာလုပ်မည်ကိုစီစဉ်ထားရန်အရေးကြီးသည်။ သင်စီစဉ်ထားသောအရာအားလုံးကိုစီစဉ်ထားပြီးအိမ်တွင်းအရွယ်မရောက်သေးသူများကရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီရန်လိုသလား။ ၎င်းကိုမိဘများခြေရာခံရန် (သို့) သူတို့ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
တစ်ဦးနှင့်အတူ visual interface နှင့်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်သည့်အလွန်အသုံး ၀ င်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအက်ပ်များကိုမထည့်သွင်းဘဲ pDevices တော်တော်များများတွင်တူညီသောအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်လွယ်ကူပါတယ် လူကြီးများပြီးမြောက်ခံရဖို့တာဝန်များကိုအချိန်ဇယားဆွဲနှင့်အသေးအဖှဲသူတို့ပြည့်စုံအဖြစ်ပြုသကဲ့သို့အဖြစ်သူတို့ကိုမှတ်။ အချိန်ဇယားများ၊ အလုပ်များ၊ ပြက္ခဒိန်များကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည့်အရာနှင့်သူတို့ဘာလုပ်နေသည်ကိုခြေရာခံရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှ
ဒီနေရာမှာငါတို့ရှာပါ Puleva လက်မှရရှိသောလျှောက်လွှာ။ အစပိုင်းတွင်သင်က၎င်းကိုအစားအစာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှဖန်တီးသည်ကိုသင်မကြိုက်သော်လည်း၊ ကြော်ငြာကြောင့်ဖြစ်သောအမှန်တရားမှာ၎င်းတွင်ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ဒါဟာတကယ်အကြောင်းပါ ၎င်းသည်ရည်ရွယ်ထားသည့်အသက်နှင့်ကိုက်ညီသောအပလီကေးရှင်းသုံးခု။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်စိန်ခေါ်မှုများသည် ၁၊ ၂ နှင့် ၃ တွင်ရှိသည်။
အစုတခု သင်ယူခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းပြီးကစားခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သော Didactic app များ။ သူတို့ကစားနည်းများကြောင့်ပျော်စရာကောင်းပြီးသင်ခန်းစာများစွာရနိုင်သည် Maxi သည်အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပြီးစွန့်စားမှုတိုင်းတွင်သင်နှင့်အတူလိုက်ပါရန်။ Maxi နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သောစွန့်စားမှု ၆ ခုအထိ။ သူတို့ကမှတ်ဥာဏ်၊ အမြင်အာရုံစွမ်းရည်၊ နှင့်အများကြီး
အဆိုပါဂိမ်းများကိုအခြားသူများအကြား, "ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ" ကလေးများအနေဖြင့် Maxi သည်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာတစ်လုံးထုပ်ပိုးနိုင်ရန်အတွက်အရာဝတ္ထုများကိုရှာဖွေရမည်။ "ကြောက်စိတ်မရှိဘဲ", ကလေးများသည် silhouette တစ်ခုစီ၏ပုံရိပ်၏အရိပ်မှတဆင့်ဘာဖြစ်မည်ကိုခန့်မှန်းရမည့်ဂိမ်းတစ်ခု။ ဒါမှမဟုတ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခု « Dr. မက်စီ " ဘယ်မှာသူတို့ Maxi နေမကောင်းတိရိစ္ဆာန်များကိုကုသပေးဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ကြီးမားသောစိန်ခေါ်ချက်များ ၂ - ကလေးများအတွက်ဂိမ်းများမှ ၂ နှစ်မှ ၄ နှစ်အတွင်း
ရေးသားသူ: Lactalis Puleva, SL
Sago Mini အာကာသစူးစမ်းလေ့လာသူ
ဒီမှာဂိမ်းအကြောင်းပြောပေမယ့်ပညာရေးအက်ပလီကေးရှင်းတွေအများကြီးထဲမှာ။ ခွေးကလေးဟာဗေးကကလေးငယ်များကိုဂြိုလ်များနှင့်ကြယ်များကြားတွင်သူနှင့်အတူကစားရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ ဤခွေးကလေးနှင့်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာပါကအိမ်ထဲမှကလေးငယ်များသည်အံ့သြစရာများစွာကိုစောင့်မျှော်နေကြသည်။ သူတို့ကထူးဆန်းသောဂြိုလ်ပြင်သူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်ပြီးအာကာသယာဉ်တွင်ပင်ပျံသန်းနိုင်လိမ့်မည်။
Mini Space Explorer က ကလေးများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, ၎င်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်သူတို့တစ်ချိန်တည်းမှာပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်သင်ယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ခဲ့တာ သူတို့ကို 100% စီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင်ဖန်တီးခဲ့သည် အကူအညီမလိုအပ်ပါဘူး သူတို့ကအပေါ်ကစားခြင်းဖြင့်လေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ် ဂြိုလ်များနှင့်ကြယ်များ၊ သူတို့သည် Harvey ၏အဖြစ်အပျက်များနှင့်စွန့်စားမှုများနှင့်အတူပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
30 ကျော်ကျော်ပျော်စရာအပြည့်အဝအရောင်ကာတွန်း ငယ်သောသူငယ်များကိုပျော်မွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်သိသည် တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ သိချင်စိတ်နှင့်အံ့အားသင့်မှုတို့ကိုလှုံဆော်ပေးသည်။ သူတို့က Harvey ကိုလက်တစ်ချောင်းသုံးပြီးအာကာသထဲကိုရွှေ့နိုင်တယ်။ download တစ်ခုနှင့်ပြီးပြည့်စုံသော application တစ်ခု။ ၀ ယ်ရန်အပိုဆောင်းအပိုထပ်ဆောင်းစရာမလို၊ ကြော်ငြာခြင်းမရှိဘဲ App တစ်ခု.
ရေးသားသူ: Sago mini
စျေးနှုန်း: € 4.49
Google Apps စတိုးတွင်ဖြစ်နိုင်ချေများစွာရှိသည်။ ပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာအချိန်တွေ၊ စိတ်ရှည်မှုတွေမဖြုန်းတီးဖို့သင့်ကိုကူညီချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်၌အချိန်ဖြုန်းရမည့်အဆုံးမဲ့နာရီများထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့သေချာပေါက်တွေ့လိမ့်မည် ကလေးတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အတွက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုအတွက်နေရာတစ်ခု နှင့်အတန်း၏အချည်မဆုံးရှုံးပါစေနဲ့။
ငါတို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကူညီပေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာစောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့အချိန်တွေကိုပိုပြီးပျော်စရာကောင်းအောင်လုပ်နေတယ် \_ t အကယ်၍ စာဖတ်သူများအကြားဤဒေသရှိအကြံပြုထားသောအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံထည့်သွင်းပါကသင်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်အလက်အနည်းငယ်ကိုစုဆောင်းမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကသူတို့အကြောင်းကိုပြောပြီး download link ကိုမျှဝေပေးမယ်။ ကြည့်ပါ coronavirus အတွင်းအချိန်ကိုဖြတ်သန်းရန်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းဂိမ်းများ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » quarantine စဉ်အတွင်းအိမ်မှပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အကောင်းဆုံးပညာရေး Apps ကို
စမတ်ရောဂါ - ဤဖုန်းသည်သင်၏ဖုန်းကိုပြုပြင်ရန် Huawei အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။ သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။